FARSAMADA SANADKA CUSUB (Festifaal weyn) - Dhulkii Barakaysanaa ee Daraasadaha Vietnam
The Vietnamesexafladda weyn ama Dabaaldega Sannadka Cusub (Tuur) waxay dhacdaa maalinta koowaad ee bisha koowaad (Jadwalka dayaxa) waana xaflad dhaqameed weyn oo dadka reer Fiyatnaamiis oo dhan.
Way adagtahay in si cad loo qeexo goorta dadka reer Fiyatnaam ay bilaabeen inay abaabulaan caadooyinka iyo ciidaha. Si kastaba ha noqotee, waxaa la rumeysan yahay in dhacdooyinkaani ay soo jireen ah qarniyo badan ka hor, ka ly, Trần, LêYn boqortooyooyinkii oo soo maray bini aadam hore Dhaqanka Thăng Long Great-Việt.
Iyagu waa maalmaha calaamad u ah dhammaadka dalagga cunnada oo ay dhammaan beeraleyda ka xorreeyaan shaqada si ay u soo dhoweeyaan imaatinka gu'ga cusub iyo wareegga cusub ee ballanqaadka ah hal sano oo shaqo adag kadib. Maalmahan, in kasta oo lagu duuduubay shaqada ama aad ku nooshahay meel ka fog guriga Vietnamese had iyo jeer waxay dareemaan walaac inay ku noqdaan waddankoodii hooyo si ay ula midoobaan qoyskooda iyo eheladooda si ay u daryeelaan meelo allabari hore (Fig.1) iyo in mar labaad la arko geedaha digaag, geedaha areca (Fig.2), Ceelasha biyaha, balliyada tuulooyinka iyo biya-mareenada… Kuwa aan dib ugu soo laaban karin guriga waxaa loo arkaa kuwo aan faraxsaneyn oo murugaysan. Caadadan ayaa si qoto dheer loogu xardhay maskaxda Dadka Fiyatnaamiiska qaab muqadas ah oo qumman ayayna ku soo if bixi doontaa indhahayaga iyagoo leh in ka badan 100 geed oo xaashi ah, oo la sameeyay horraantii qarnigan.
Beeritaanka geed timireedka loo yaqaan 'areca timir', qofku waa inuu si fiican u daryeelaa tan iyo maalmihiisii ​​hore. Geedku waa inuu ahaadaa mid adag si uu u soo saaro lows waaweyn una noqdo midho dhal leh, diirka cagaaran leh, macaan iyo udub weyn. Geedka timirta ah ee areca hoostiisa, Vietnamese beeraleyda magaalooyinka koonfureed waxay abuuri jireen muuska, khudradda, geed-tufaax int si ay u isticmaalaan dhulka iyagoo ilaalinaya qoyaanka isla markaana qallajinaya geedaha 'areca palmtree'
Si kastaba ha noqotee, beeraleydu waligood ma isticmaali doonaan wax soo saarka dheeriga ah ee noocan ah, maxaa yeelay waxay sababi kartaa in xididdada geedka geed-timirta loo jaro, sidaas darteedna ay u xadideyso wax qabadkooda.
Quang Ngai waa aag ay dad badani u garanayaan su'aasha ah in la sameeyo beero iyo geedo beero ah oo la beero. Markaad sameysato beero, qofku wuxuu beeri karaa boqollaal geed oo timireed ah, sida kuwa ku yaal Nghĩa Thành, Tư Nghĩa, Mộc Đức, ee magaalada Quang Ngai iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaal gobolka buuraleyda ah, sida Sơn Tây, Sơn Hà2...
"Sheekada areca-nut iyo betel”Waa nooc sheeko duug ah oo qayb ka qaadanaysa sheekooyinka qadiimiga ah ee Fiyatnaamiis. Laga soo bilaabo xagal dahsoon, ayaa mid ka dhistay sheekada jacaylka naxdinta leh ee Walaalayaal Cao, isaga oo sita shahaadada nidaamka guurka ee ku lug leh hal nin iyo hal xaas, oo wuxuu sharxay caadada cunida khiyaamada, iyo u isticmaalka aaga-beedka iyo khiyaanada guurka.
'Theca-nut iyo betel' sidoo kale waxay noqdeen nooc bixinno aan laga tegi karin dhammaan munaasabadaha xafladaha dadkeenna sida: "Qashinka sharadka ah wuxuu bilaabaa kubbadda. "Fig.3). Geedka loo yaqaan 'areca-Palm-timation', oo leh muuqaal dhererkiisu toosan yahay oo dhererkiisu sarreeyo, ayaa astaan ​​u ah ninka qumman.
2 Sida laga soo xigtay NVT - Geedaha beertada ee Quảng Ngãi - Dib-u-eegista dhaqanka ee billaha ah - Đinh Sửu Guga 1997 - P. 36, 43.
(Booqday jeer 1,070, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 2,224
← TAARIIKHII GUUD EE VIETNAMESE Qorista - Qaybta 3
Walaacyada DADKA WAAWEYN - Welwelka SOO SAARID - Qaybta 1aad →